सेक्स र खानामा के रोज्नु हुन्छ ? - Enepalese.com
सेक्स र खानामा के रोज्नु हुन्छ ?
नबिन बिक २०७६ असोज २० गते १२:३१ मा प्रकाशित
नबिन बिक ,चीन मानिसको जीबनमा जति खाना जरुरी छ, त्यति नै “ सेक्स” पनि जरुरी छ, खाना नपाए मान्छे कमजोर,पातलो,काम गर्न सक्ने शक्ति घट्छ र शिथिल हुन्छ भने ,“ जीबनमा सेक्स भएन भने मान्छे कुन्ठीत हुन्छ ।
अन फ्रेन्डली हुनुको साथै हिस्रक भएर जान्छ, हामीले खानाको लागी धान, गहु, मकै सब्जी रोप्छौ, फलाउछौ तर सेक्सको लागी हाम्रो बैकल्पिक ब्यबस्था के त ? बिहे बाहेक अरु के बिकल्प छ त ? हामीले कहिल्यै सोचेका छौ ? कुनै पुरुष वा महिला बिधुवा वा बिदुर भएमा लोकलाजले वा परिवारका अन्य सदस्यको असहमतिका कारण पुन बिहे वा खुलेरै कुनै महिला वा पुरुष साथी बनाउन कति गार्हो छ ।
अझ महिलाहरुको लागी झन गार्हो छ, लुकीछिपी राखेको सम्बन्धमा यदि समातिएमा महिला नै बढी चरित्रहिन देखाईन्छ । भोलीका दिनमा उसलाई खोटो सिक्का झै ब्यबहार गर्छन,।
जीबनको सबै भन्दा सुन्दर चीजलाई यहा सबै भन्दा कुरुप बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ, परापुर्ब कालमा पनि ईन्द्रले स्वर्गमा अप्सरा,परी, मेनका हरु राखेका थिए। रुप र भेय बदलेर बिभिन्न परस्त्री गमन गरेका थिए, भारतका ठुला ठुला पुजारी र बाबा र कृश्चियनहरुको धर्मगुरु पोप हरुको यौन कान्ड बेला बेलामा सार्बजनिक हुनको कारण पनि यही हो । यो अति जरुरी र पबित्र कार्य हो । जुनकार्यबाट मानबको सृष्टि हुन्छ त्यो कार्य कसरी सबै भन्दा तुच्छ हुहुन्छ ।
आजको दिनमा जसरी घटनाहरु सार्बजनिक हुदै आईरहेका छन त्यसले के देखाउछ भने अब यस बिषयमा ढोंगी नबनीकन बृहत खुल्ला बहसहुनु जरुरी छ। सातै प्रदेशमा बिभिन्न ठाउमा निश्चित मापदण्ड तोकेर कम्फर्ट जोन जरुरी छ, जहा मान्छेले चाहेको रमाईलो गर्न सकोस, यहा त बल्ल तल्ल फकाएर गर्लफ़्रेंड संग होटलमा जादा र रुम सर्भिस वा वेटरले ढोका ढक्ढकाउदा पनि सातो पुत्लो जानी अवस्था छ । बालिग भै सकेपछि यो कुनै अपराध होईन ।
बिबाह पश्चातको सम्बन्ध पनि कुनै पाप वा अपराध होईन तर यही कारणले चै छोडपत्र दिन मिल्ने कानुन हाम्रै छिमेकी भारतमा पारित भएको छ। महराले कुनै बाटोमा हिडीरहेकी केटीलाई च्याप्प समातेर गाडीमा हालेर घर लगेर रेप गरेको होईन । उनिहरुको बर्षौ देखीको सम्बन्धमा केही माग पुर्ति नहुदा बलात्कारी बनाईएको हो । यस्तो सम्बन्ध हाम्रा सांसद , मन्त्री, ठुला ठुला पुलिस र आर्मीका हाकीमहरु वा सरकारी कर्मचारी र ठुला ठुला कॉर्पोरेट हाउसका मालिक र म्यानेजर सम्मका ब्यक्तिहरुले सेक्सको लागी बैकल्पिक ब्यबस्था गरेर कोही न कोही जोहो गरेर राखेका हुन्छन ।
सबैलाई चाहिने रमाईलोको लागी दीर्घकालीन ब्यबस्था भएन भने हाम्रो समाजमा दिर्घकालीन रुपमा ठुलो असर पार्ने छ। महरा जस्ता केस अझै कति आउन बाकि छ, र आउने छन, जस्लाई हामीले हाम्रो आदर्श मानेका छौ । त्यस्ता ब्यक्तिको यस्ता घटना सार्बजनिक हुदा जनमानसमा र अन्तराष्ट्रिय जगतमा के असर पार्छ ?
तपाई भोकाएको बेलामा एकतर्फ मासु भात र अर्को तिर सन्नि लियोनी वा बलिउडकी कुनै सुन्दर नायिका वा गाउघरकै कुनै सुन्दर नारी संगको संभोगको बिकल्प दिएमा तपाई कुन रोज्नु हुन्छ? कृपया ईमान्दर भएर छातिमा हात राखेर यसको जवाफ दिनुहोला ।
जहासम्म मलाई लाग्छ धेरै ब्यक्तीहरु ति महिला संगको सेक्स नै रोज्नेछन त्यसैले कृपया ढोंगी बन्न छोडेर यथार्थको धरातलमा उभिएर सेक्सबारे अलि उदार हुने बेला आएको छ ।
नबदुर्गा भवानीले सबैलाई यसबारे सकारात्मक सोच प्रदान गरुन यही नै मेरो बिजया दशमीको शुभ कामना ।